डा. आङ्शु गुरुङको बधाई कार्यक्रम - GurkhaMediaडा. आङ्शु गुरुङको बधाई कार्यक्रम - GurkhaMedia
डा. आङ्शु गुरुङको बधाई कार्यक्रम
लन्डन ७ नोभेम्बर । डा. आङ्शु गुरुङको बधाई कार्यक्रम द प्यालेस रेष्टूरेण्ट एण्ड भेण्यू, अल्डरसटमा सम्पन्न भयो । कलर सार्जन्ट अमर गुरुङ र श्रीमती सुकु गुरुङका कान्छी छोरी डाक्टर/ क्याप्टेन आङ्शु गुरुङ हुन् । नेपाली (गोर्खाली) मुलका पहिलो नेपाली चेली, जसले डेन्ट्रेष्टी पढेर सिधै ब्रिटिस सेनाको क्याप्टेन पदमा प्रवेश गरेकी छन् ।
‘कोभिड १९ को असरले पारिवरिक भेटघाट गर्न पनि असहज स्थिति थियो । बेलायतमा भेटघाटको स्थिति खुकुलो भएपछि आङ्शुको लागि बधाई कार्यक्रमको आयोजन बाबाआमाले गरेको थियो । साथीभाइ, आफन्तजन, परिवारका सबैलाई एकै ठाउँमा बोलाएर बधाई कार्यक्रम गर्दा समयको पनि बचत हुने र भेटघाट पनि गर्न पाइने उद्देश्यले जम्मा गरेका हौं । सबै जना आइदिनुभयो खुसी लागेको छ,’ आङ्शुका बाबा अमरले भने ।
‘आवश्य पनि छोरीको सफलतामा आफन्तजनहरुले त्यसै पनि बधाई दिन चाहन्छन् र सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर कार्यक्रम गर्दा सजिलो र छरितो हुँदो रहेछ,’ मन्जु गुरुङ राई भन्छिन् । खाना पिउने त प्रशस्त हुने नै भयो । मुख्य आकर्षण कार्यक्रममा उपस्थित भएकामध्ये सबैभन्दा सिनियर आङ्शुका बज्यै ८४ वर्षीया राजकुमारी गुरुङले पहेँलो खादा नातिनीलाई लगाइदिइन र आशीर्वाद दिइन् । त्यस पछि बज्यैले केक काटिन र आङ्शुले बज्यैलाई नै सुरुमा खुलाइन् । यो दृश्य चलिरहँदा सुकुको आँखामा हर्षको आँसु छर्लङ्ग देखिन्थो ।
स्टेजमा आमाबाबा, बज्यै, दिदी शिरिष, भेना चेतन, दिदीको छोरा र मञ्जु उभिएका थिए ।
शिरिष, चेतन, तारा र निलिमाको समूहले निरन्तर आधुनिक, धेरै चर्चित पुरानो गीतहरुमा पनि नाच प्रस्तुत गरेका थिए । आङ्शु र बाबाआमालाई पनि बीचमा नचाएका थिए । मञ्जुले डा. आङ्शुको बारेमा छोटो बोलेका थिए । प्रत्येक टेबल टेबलमा गएर आफन्तजनहरुबाट आशीर्वाद, बधाई ग्रहण र सामूहिक तस्बिर लिनेक्रम निकै लामो चल्यो ।
आङ्शुले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिइन् । उनीको सफलताको श्रेय विशेष आमालाई नै दिइन् । बाबा, दिदी र भेनाको पनि मद्दत नभएको होइन तर आमालाई उच्च स्थानमा राखिन् । आङ्शुको रगतमा सेनाको रगत छ । बाजे स्व. राम प्रसाद गुरुङ महावीर चक्रबाट सम्मानित हुन् । बाबा अमरकुमार गुरुङ कलर सार्जेन्ट पदबाट आवकाश ब्रिटिस सेना हुन् । साइँला बा सुदन गुरूङ पनि कलर सार्जन्ट भएर अवकाश भएका हुन् ।
क्यूनिस्मेरी युनिभर्सिटीबाट सिभिल ईन्जिनियरीङमा ग्रेज्यूट गरेपछि डेन्ट्रिष्टी पाँच वर्षे कोर्ष पूरा गरी डाक्टर बनिन् । बाजेबाबुको पाइला औल्याउँदै ब्रिटिस सेनामा सिधै क्याप्टेन पदमा भर्न हुन सफल क्या. आङ्शुलाई गोर्खा मिडियाको तर्फबाट पनि बधाई छ ।